Ho any Disney Plus ve i Shang-Chi? Aiza no hijerena, streaming antsipirihany sy ny momba ny sarimihetsika MCU - Pop-Kolontsaina
Ho any Disney Plus ve i Shang-Chi? Aiza no hijerena, streaming antsipirihany sy ny momba ny sarimihetsika MCU
Ny fisongadinan'i Marvel Shang-Chi sy ny Legend of the Ten Rings dia mety hivadika ho mpankafy ankafiziny. Tonga manerantany tamin'ity herinandro ity, mikasa ny hijery ny kolontsaina Aziatika ao amin'ny Marvel Cinematic Universe (MCU) i Shang-Chi satria ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny tetikasa Marvel ho avy dia manana faka Aziatika.
Shang-Chi sy ny angano amin'ny peratra folo no sarimihetsika faharoa amin'ny MCU dingana fahefatra aorian'izay Mpitondratena mainty , ary avo be ny fanantenan'ny mpankafy. Ireo teasers, mpanamory lalana , ary rakitsary manokana an'ny Shang-Chi efa nanondro ihany koa ny taonina callbacks sy atody Paska avy amin'ny tetikasa MCU hafa.
Ireto ny pitsopitsony momba ny famoahana an-tserasera sy an-tsehatra ny Shang-Chi sy ny angano amin'ny peratra folo.
Ahoana no ahafantaranao ny olona iray no mampiasa anao
Shang-Chi sy ny Legend of the Ten Rings: Disney + daty famoahana
Rahoviana i Shang-Chi no mamoaka?
Daty famoahana an'i Shang-chi (Sary avy amin'ny Marvel)
Shang-Chi sy ny angano amin'ny peratra folo andrasana hivoaka manerantany amin'ny daty samihafa. Ity ny fandaharam-potoana famoahana ny Shang-Chi :
1 septambra: Frantsa, Indonezia, Italia, Korea atsimo, Netherlands, Suède ary Singapour
2 septambra: Arzantina, Aostralia, Brezila, Tseky, Alemana, Danemarka, Hong Kong, Hongria, Mexico, Kambodza, Portugal, Serbia, Russia, Slovakia, Taiwan, ary Ukraine.
3 septambra: Bulgaria, Canada, Spain, Finland, UK, Ireland, India, Islandy, Latvia, Poland, Turkey, Lithuania, Saudi Arabia, ary Etazonia.
9 septambra: Gresy
16 septambra: TAILANDY
Mamoaka an-tserasera ve i Shang-Chi?
Ny sarimihetsika faharoa an'ny MCU dia mivoaka manokana amin'ny sinema ankehitriny (Sary avy amin'ny Marvel)
Ny tetikasan'ny MCU rehetra dia midina amin'ny Disney + na famoahana eo noho eo na aorian'ny fanaovana teatra. Ny tranga ny Shang-Chi sy ny angano amin'ny peratra folo dia mitovy ihany satria ny sarimihetsika dia hivoaka amin'ny Disney + amin'ny volana Oktobra.
inona ireo zavatra tokony hohafanaina
Noho izany, ny mpijery dia tsy maintsy miandry fotoana iray aorian'ny famoahana ny tantara an-tsehatra.
Inona ny daty famotsorana an'i Shang-Chi ao amin'ny Disney +?
Daty famoahana ao amin'ny Disney + (Sary avy amin'i Marvel)
Satria i Shang-Chi dia tsy mandray ny fomba fampifangaroana toy ny Black Widow, dia ho hitan'ireo mpankafy ihany ny famoahana farany an'i Marvel ao amin'ny sinema amin'ny herinandro voalohan'ny volana septambra any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Ho an'ny famotsorana an'i Disney + dia tsy maintsy miandry 45 andro aorian'ny famoahana an'i Etazonia ny mpankafy. Noho izany, i Shang-Chi sy ny Legend of the Ten Rings dia azo navotsotra tany Disney + manodidina ny 18 Oktobra.
Na izany aza, tsy mazava na hitranga any Etazonia fotsiny ny famoahana Disney + na manerantany. Noho izany dia tsy maintsy miandry ny fanambarana ofisialy momba izany ny mpankafy.
ahoana no hamantarana raha liana izy
Shang-Chi sy ny angano amin'ny peratra folo: mpilalao ary inona no antenaina?
Ny Mandarin dia manao ny laharana voalohany amin'ny MCU (Sary avy amin'i Marvel)
very ny finoako ny olombelona rehetra
NA Shang-Chi dia nanambara taona taorian'ny nahavitan'ny Lehilahy vy andian-tsarimihetsika, referansy ireo mpamorona ny peratra folo imbetsaka mandritra Lehilahy vy SY Iron Man 3 . Amin'ny voalohany Lehilahy vy , ireo mpampihorohoro naka an-keriny an'i Tony Stark dia avy amin'ilay fikambanana iray ihany.
Ao amin'ny ampahatelon'ny Lehilahy vy andiany, nampidirina Marvel Ny Mandarin (naseho taty aoriana fa sandoka). Ny fotoana farany nanambarana na nandrenesana ny supervillain Marvel dia tao amin'ny Marvel's One-Shot: Arahaba ny mpanjaka, taorian'izay dia tsy noresahina intsony ny warlord aziatika.
Shang-Chi sy ny Legend of the Ten Rings dia mikendry ny hijery ny tantaran'ny mpiambina an'i Marvel ary mampiditra an'i Shang-Chi ao amin'ny MCU. Ity mpilalao ensemble manaraka ity dia ho ampahany amin'ny tetikasa Marvel ho avy:
Simu Liu amin'ny maha Shang-Chi
Awkwafina amin'ny maha Katy Bashir
Meng'er Zhang ho Xialing
Fala Chen ho Jiang Li
Florian Munteanu ho Razor Fist
Benedict Wong ho Wong
Michelle Yeoh amin'ny Jiang Nan
Tim Roth ho fahavetavetana
Ben Kingsley toy ny Trevor Slattery (Mandarin sandoka)
Jade Xu ho mpitondratena mainty
Jodi Long toa an'i Ramatoa Chen
Andy Le amin'ny maha mpivarotra faty azy
zavatra mahafinaritra atao rehefa mankaleo anao
ajanony ny fanomezan-tsiny ny hafa noho ny lesoka nataonao
ajanony ny fanomezan-tsiny ny hafa noho ny olanao
zavatra tokony hatao rehefa any an-trano irery ianao ary mankaleo
bea alonzo sy roque Dominic
homamiadana ny homamiadana